KISS: Fududaanku waa Furaha Nolosha Guusha
Farshaxan iyo sawirqaade Nick Dewar dhintay toddobaadkan. Wuxuu kasoo shaqeeyay shirkado badan oo kala duwan Bil walba Atlantic oo loo diro 'Random House', iyadoo la siinayo sawirro xeel dheer ereyada xiisaha leh ee ku jira maqaal ama buug. Shaqada aan ugu jeclahay Nick Dewar waxay muujineysaa labadaba xirfadeyda iyo falsafadeyda shaqsiyadeed:
Fudeydku waa furaha nolosha lagu guuleysto.
Tani waa dib-u-habeyn xirfad leh oo codkar ah habka tijaabinta waqtiga KISS:
Maya, maahan KISS -
Mabda'a KISS -? Ka dhig mid Fudud, Doqon ah.?
Kuwani waa labadaba tarjumaadaha casriga ah ee Occam's Razor, oo leh 'hay'adaha waa inaan lagu badin wixii loo baahdo ,? ama guud ahaan, 'istiraatiijiyadda ugu fudud waxay u egtahay tan ugu fiican.?
Marka maxaan tan kuugu sheegayaa? Maxay tahay sababta aan ugu jiidayo falsafad qarnigii 14aad, Ace Frehley, iyo nin reer Scotland ah oo dhowaan dhintey? Sababtoo ah bulshadeena dhaqsaha badan, tiknoolajiyada sare, had iyo jeer-bulshada, waxaan ilaawnaa isku dayga inaan ku xallino dhibaatooyinka xalalka fudud. Inta badan qof kastaa wuxuu raadiyaa tiknoolajiyad cusub ama qaab cusub oo lagu xalliyo dhibaatada markaan adeegsan karno xalalka fudud ee u baahan kharash yar isla markaana aan siino faa'iidooyin muddada-dheer ka wanaagsan.
Falsafadaani waxay ka hadlaysaa astaamaha alaabta sidoo kale. Sababta oo ah alaabtaadu inay leedahay astaamo badan macnaheedu maahan inay dabooli doonto baahida macaamiishaada. Haddii aadan kalsooni ku qabin fahamkaaga macaamiishaada? baahiyaha, waxaad haysataa dhibaato ka weyn, ka aasaas badan tan astaamaha la fulinayo. Waxaad ubaahantahay inaad sifiican ufahamto isticmaaleyaashaada, macaamiishaada, iyo naftaada. Kaliya ha daaweyn calaamadaha. Si fudud u dhig, oo soo ogow waxa run ahaantii socda. Oo xusuusnow -
Oh, iyo sidoo kale xusuusnow in KISS ay sidoo kale qurux badan tahay!
In Da'da Macaamiisha Internetka aan la iska indho tiri karin
Qaali ah AT & T U-Aayadda